Kazakhstan : Mihetsika Manohitra Ny Sivana An-tambajotra ireo Bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Kazakhstan : Mihetsika Manohitra Ny Sivana An-tambajotra ireo Bilaogera
Nandika (fr) i Ivan
Voadika ny 30 Jona 2017 12:24 GMT
Ny fanitsiana ny lalàna Kazakh amin'ny lafiny aterineto, nalefa tany amin'ny Parlemanta tamin'ny herinandron'ny 4 May 2009, dia namoha ny fikatrohan'ny mpitoraka bilaogy amin'ny teny Kazakh. Lahatsoratra maro amin'ny teny Kazakh no niezaka ny hanadihady ny dindon'ny tolodalàna vaovao eo amin'ny hoavin'ny sehatra Aterineto ao Kazakhstan. Maro no manao tsikera manindrontsindrona, raha toa ka tsy gaga amin'ireo fivoaran-draharaha ireo ny sasany.
Janarbek Matay, iray amin'ireo mpanorina ilay tranonkala Kazakh tena malaza be Massagan.com dia miomboa hevitra [amin'ny teny Kazakh, toy ireo bilaogy rehetra voatanisa] fa tokony mamehy kokoa ny Kaznet ny fanjakana [sehatra aterineto Kazakh ], nefa mino ihany koa fa tetikasa kivalavala ity volavolan-dalàna ity.
Tsy izany no lalàna nandrasako. Hametraka sakana amin'ireo bilaogy sy tranonkala izy io raha toa mandiso tsipelina teny na iray monja aza izy ireo. Manahy aho hoe tsy tena hahavita ny hanakàna ireo tranonkala tena mampidi-doza izany. Mila lalàna manivàna ny horonantsary vetaveta sy hosoka isika.
“‘Bala iray monja dia hofatin-dry zareo ny bilaogy rehetra” manoratra i Urimtal sy Symbat.
Efa nampoiziko ihany ity…Tsy nitati-bolana ny tsy fahampian'ny famehezana ny Aterineto angaha ny bilaogera ? Nanao izany ry zareo. Dia izao, lasa tena izy ilay nofy…
Nanadihady bilaogera maro tamin'ny bilaoginy ihany mikasika ilay tolodalàna i Nurgisa. Ny ankamaroany dia miaiky fa raha tokony ho voafehy ny sehatra .kz, mila mampifantoka kokoa ny ezaka ao amin'ireo tranonkalanà fampielezankevitra mpanao an-tendrony na misy votoaty manàla baràka.
Manoratra i Bakytnur, mpitantana ny vavahady Massagan:
”Raha tena tokony hifehy tokoa ny votoaty an-tambajotra izy ireo, manome soso-kevitra azy aho ny hanakàna ireo tranonkala nazis na mpankahala vahiny aloha, nefa mila fanohanana miafinafina avy amin'ny fanjakana ny tranonkala Kazakh.”
Indrisy anefa, tsy misy na inona na inona toa izany ao amin'ilay volavolan-dalàna. Ny olana fototr'ireo bilaogera dia ilay lalàna mihevitra ny bilaogy, tambajotra sosialy sy sehtra fifampiresahana ho toy ny masoivohon'ny media nentim-paharazana. Mihevitra i Arsenal fa :
“Mila ity lalàna ity ny fanjakana mba hanakànana ireo tranonkala ”ratsy”, amin'ny alàlan'ny fialantsiny feno fitaka”
Mizara ny hevitr'i Arsenal i Ansar ary manampy :
Tena feno hevitra ratsy koa ilay Majilis [efitra ambany ao amin'ny parlemanta] ka! Tena mampalahelo hoe olona vitsy fotsiny no mba kinga saina ao. Ahoana no ahafahantsika mametraka ny hoavin'ny firenena eny am-pelatanan'olona tsy mahafantatra ny maha-samihafa ny tranonkala sy bilaogy?
Miomboa hevitra amin'izany ihany koa i profesora Mylzhyn. Asongadiny ny tsy fahampiana fahalalana manodidina ilay tolodalàna.
Raha mba nanana fitondrantena mahay mandray andraikitra manoloana ny votoaty an-tambajotra ireo tomponà tranonkala , ary manao fifehezantena ampiharin'ny tenany ihany, mety tsy nila an'ity fanitsiana ity isika. Saingy samy manana ny fikasàny ny mpampiasa tsirairay.
Maminavina ny ho avin'ny lalàna i Baurzhan, raha toa ka tsy maintsy hampandany azy io an-tery ny Filoha.
Izaho mieritreritra fa natao hampifaly ny mpanohitra fotsiny ity lalàna ity. Tsy misy iraharahian'ny fanjakana ireo votoaty an-tambajotra amin'ny teny Kazakh. Raha mametraka an'io ry zareo, hotahiriziko amin'ny .com ny blaogiko ary hilaza aho fa Kazakh mipetraka any Etazonia no mitantana izany.
Raha fintinina, ny antony fototra hanoheran'ireo mpitoraka bilaogy amin'ny teny Kazakh an'ity tolodalàna ity dia satria hanome fahafahana hanakàna bilaogy na inona na inona antony izany, ary hanaisotra ny zon'ireo bilaogera izy ity.
Nozaraina tao amin'ny neweurasia ihany koa ity lahatsoratra ity